Mkpa ọkụ mberede ọkụ China LED na -ewu ewu na nrụpụta na ụlọ ọrụ America | Saselux
Mmepụta: 3W max.
①[UL gbaara ezi àmà] SASELUX duru ọkụ ihe ngosi ọpụpụ mberede cA tụlere nkeji ombo na ihe UL924 chọrọ. Fire retardant, injection-kpụrụ thermoplastic ụlọ, standard maka ọkụ ọkụ mberede, ike na akụrụngwa otu. Modul a na -ewu ewu na America.
②[Ike Ike] Batrị nkwado nickel cadmium na -enye ihe karịrị 90mins n'oge ọkụ kwụsịrị. Batrị enwere ike dochie anya nke ejiri ọkụ nrịba ama ọpụpụ mberede nwere ike chajịa AC 120/277V karịa ugboro 300.
③[Na-anọ ogologo oge] Fluorescent na -acha ọbara ọbara Led iji kwado akara ọpụpụ 50,000 awa ndụ ma na -ahụ anya site na ihe ruru 100 ụkwụ pụọ.
④[Ntinye dị mfe] Igwe ọkụ ọkụ abụọ nwere ike idozi. Ndidọk: Ntọala mgbidi, Nrịgo elu site na gụnyere Canopy si SASELUX duru ọkụ ọpụpụ mberede ọkụ. Kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ iru mmiri n'ime ụlọ, mana ọ bụghị Wet.
⑤[Enwekwara ogo & Ọrụ] SASELUX niile na-ebute ọkụ ọpụpụ mberede nke amụma EGO-BACK & WARRANTY na-enweghị nchekasị nke na-akwado afọ 5 maka bọọdụ eletriki na ụlọ nwere ọrụ ọkachamara mgbe ọre ahịa gasịrị.
Nke gara aga: Akara Ọpụpụ Ọkụ kacha mma na North America
Osote: Ekwentị mkpanaaka, ụmụaka, ndị agadi